यस वर्षको वसन्तकालीन मौसममा सगरमाथा आरोहीबाट ४४ करोड बढी रोयल्टी संकलन, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यस वर्षको वसन्तकालीन मौसममा सगरमाथा आरोहीबाट ४४ करोड बढी रोयल्टी संकलन
भूमिराज 'पिठातोली' , १६ अषाढ २०७६
काठमाडौं। नेपाल सरकारले सगरमाथाको आरोहण खुला गरेदेखि सबैभन्दा बढी आरोहीले यस वर्षको वसन्तकालीन मौसममा आरोहण गरेका छन्। नेपाली नागरिक तथा अन्य मुलुकका नागरिक गरी यस वर्ष मात्रै ६ सय ५९ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्।
अनुमति पाएका ७ नेपाली र ३७ वटा विदेशी आरोही दल गरी ४४ आरोहण दलका २ सय ८१ जना आरोही र उनीहरुका गाइडहरुले यस वर्षको वसन्तकालीन मौषममा सगरमाथा आरोहण गरेको पर्यटन विभागले जनाएको छ।
१४ जना नेपाली र ३ सय ६७ जना विदेशी आरोहीहरुले मात्रै ४४ करोड २४ लाख ३७ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा रोयल्टी तिरेका छन्। जसमा १४ जना नेपालीले १० लाख ५० हजार र विदेशी आरोहीले ३९ लाख ९७ हजार डलर (नेपाली रुपैयाँ ४४ करोड १३ लाख ८७ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ ५० पैसा) रोयल्टी तिरेको पर्यटन विभागका प्रवक्ता सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए।
सगरमाथा आरोहण गर्ने ३ वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने यो वर्षमात्रै अघिल्लो वर्षको भन्दा ३५ जनाबढी आरोहीहरुले सगरमाथा आरोहण गरेका छन्। आरोहणका लागि ४४ आरोहण दलका २ सय ८१ आरोही र उनीहरुलाई सहयोग गर्नका लागि ६ सय ४२ जना (सरदार), गाइड र शेर्पासमेत गरेर जम्मा १ हजार २३ जना बेस क्याम्पसम्म पुगेका थिए।
आरोहणकै क्रममा सगरमाथा ८ जनाको मुत्यु भएको र एक जना हराइरहेको विभिन्न एजेन्सीको विवरणलाई उद्धृत गर्दै विभागले जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ।
त्यस्तै सगरमाथापछिको दोश्रो बढी रोयल्टी जम्मा गर्ने हिमाल हो लोत्से। ८ हजार ५ सय १६ मिटर उचाई रहेको लोत्सेमा यस वर्षको बसन्तकालिन मौसममा नेपाली तथा विदेशी गरी १२ आरोहण दलका ९८ जना आरोही र अन्य गाइड तथा सहयोगीहरुले लोत्से हिमालको आरोहण गरेका छन्।
जसमा १ लाख ७४ हजार ९ सय डलर (नेपाली रु. १ करोड ९३ लाख ५९ हजार ८ सय ५५) रुपैयाँ राजश्व (रोयल्टी) उठेको पर्यटन विभागका प्रवक्ता थापाले बताए।
उनका अनुसार तेश्रो नम्बरमा यस वर्षको बसन्तकालिन मौसममा बढी रोयल्टी उठाउने हिमाल हो मकालु। ८ हजार ४ सय ६३ मिटर उचाई रहेको मकालु हिमालमा यो वर्षको वसन्त ऋतुकै समयमा अनुमति पाएका ४ आरोहण दलका ५३ जना आरोही, गाइड र सहयोगीले आरोहण गरेका छन्।
मकालु हिमाल आरोहीबाट ९५ हजार ४ सय डलर (१ करोड ५ लाख ३८ हजार ७ सय ३० नेपाली रु.) रोयल्टी जम्मा भएको पर्यटन विभागले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म साना ठूला गरी ४ सय १४ हिमालको आरोहण खुला गरेपनि यस वर्षको बसन्तकालिन मौसममा ३० हिमालमा १ सय १३ आरोही दलका ८ सय ६८ आरोहीले आरोहणका लागि अनुमति लिएका हुन्।